အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း (LPN) – Myanmar Live
June 14, 2018 June 18, 2018 - by lyju
မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ပြဿနာအရပ်ရပ်ကိုအနီးကပ်ဆုံးကူညီပေးနေတဲ့(LPN )အဖွဲ့ အစည်းဘာလဲဆိုတာ
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တ င်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်းLabour Rights Promotion Network Foundation (LPN) အဖြစ်လူသိများတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းကို ၂၅၄၇ ခုနှစ်လောက်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ ပြီးရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ အများစုနေထိုင်တဲ့ SamutSakhonနယ်မှာအဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ လူ့ အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး ကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း မှရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ကလေးများအတွက်ပညာရေးကိုအဓိကထား ဆောင်ရွက် ပေးနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကလေးငယ်များ ပညာရေးစနစ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရနအခက်အခဲများ၊ တစ်ချို့ ကလေးများအုပ်ထိန်းသူမဲ့ နေခြင်းနှင့် အလုပ်ရုံများတွင်ကလေးလုပ်သားများရှိနေသေးသော ပြဿနာများကို မြင်တွေ့ နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးကိုိ 2547ခုနှစ်တွင် NGOအဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများနယ်မြေပြောင်းရွှေ့ ခြင်းများကိုဖြေရှင်းပေးရန်စစ်ဆေးရေးတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ လိုစတင်ခဲ့ချိန်မှာအတားအဆီးပြသနာများစွာရှိခဲ့ ပါတယ်။ မူရင်းအမည်မှ 24ဒီဇင်ဘာ 2551ခုနှစ်တွင် “အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း “အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး တရားဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ ပါတယ်။
Vision ဆိုသည်မှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးကွန်းယက်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေး ကိုတိုးမြှင့်ရန်ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေရန် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံလူမှုရေးရာများတွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း (LPN)ဆိုရင် အလုပ်သမားများနှင့်မိသားစုဝင်များ၏ ရွေ့ ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာနေထိုင်နိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟာဆိုရင် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုကူညီပေးခြင်းနှင့် အကြံပေးနေရာလည်းဖြစ်သလို အလုပ်သမားများရဲ့ နေရာရွှေ့ ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေရေးရာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပြီးကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးသည့်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။အခုဆိုရင် ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟာထိုင်းရောက်မြန်မာ ရွှေ့ ပြောင်း အလုပ်သမားများအားလုံးကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက် နယ်ပယ်အရပ်ရပ်ကိုချဲ့ ထွင်နေပါပြီး ။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများနေ့ စဉ်အမျှတိုးများလာပြီးအဲ့ထဲမှာမှ လူငယ်တွေ အများအပြားပါရှိတဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားရဲ့ ကလေးငယ်များပိုမိုမွေးဖွားလာစေခဲ့ ပါတယ် ။ဒါကြောင့် လူကုန်ကူးမှု ပြသနာတွေကို ဖြစ်ပွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီပြသနာတွေကို၂၅၅၁ခုနှစ်မှစပြီး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်လာခဲ့ ပြီးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒီပြသနာတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနှိမ်နှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ အစည်းဟာဆိုရင် မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ထိုင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ လိုိအပ်ချက်တွေကိုကူညီလိုချင်သောအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့် အလုပ်သမားများရဲ့ လုပ်ငန်းအတွင်းနယ်မြေဆင်းကာအနီးကပ်ဆုံးသွားရောက် လေ့ လာတာများပါတယ် ။ဒါကြောင့် အလုပ်သမားတွေရဲ့ ပြသနာတွေကိုကောင်းစွာသိရှိပါတယ်။ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများလုံလောက်သောလစာကိုရရှိပေမဲ့ အများအားဖြင့် ကြုံတွေ့ ရတဲ့ ပြသနာတွေက မိမိကိုယ်မိမိအားမကိုးနိုင်ခြင်းတွေနဲ
့ရင်ဆိုင်ရခြင်းလူမှုကာကွယ်ရှောက်စောင့်ရေးကိုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းကိုခံရခြင်းအတင်းအဓ္ဓမလုပ်အားခိုင်းစေပြီးလူကုန်ကူးမှုကိုခံရခြင်းတို့ ကြောင့် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပြဿနာတွေကို ပြတ်သားထင်ရှားစွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာအခြေပြုပြီးအဓိကဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသိအမြင်တွေမြှင့်တင်လာစေရန်နှင့် လူအခွင့်အရေးရရှိမှုကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ပေးရန် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ မှီခိုသူနှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလူမှုနေထိုင်ရေးများတန်းတူအခွင့်အရေးများရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ဒီအချက်တေကြောင့် အဖွဲ့ အစည်းအလုပ်လုပ်ပုံမှာမြန်မာရွေ့ ပြောင်းလုပ်သားများ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရန် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၈နှစ်တုန်းကအတွေ့ အကြုံမှရရှိသောရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အကြံပေးကူညီခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေချိန်တွင် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သတ်သော ပြသနာများကိုသိရှိရပြီးဗဟုသုတများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုသိကျွမ်းလာစေပါတယ်။အထူးသဖြင့် နိုင်ငံမဲ့အုပ်စုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ကိစ္စရပ်များကိုပိုမိုသိရှိလာစေပါတယ်။လူ့ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အလွဲသုံးစားခံရခြင်းများအတွက် ရရှိသင့်သောအခွင့်အရေးများရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် သူတို့ ၏မှီခိုသူများအတွက်ပါ ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်းများ၊ကျန်းမာရေးအတွက်ရပိုင်ခွင့်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိစေခြင်းနှင့် ပညာရေးနှင့် လူမှုရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအစရှိတာတွေကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ အပြင် အလုပ်သမားများရဲ့ ပြသနာတွေကိုတိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်းစင်တာ တရားစွဲဆိုခြင်းLabour Center (LC-LPN), ရေငါးဖမ်းလုပ်သားများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစင်တာ Seafarers Action Center (SAC) , Fishermen Center ,အစရှိတာကိုတည်ထောင်ပေးပြီးအလုပ်သမားများ၏ ပြသနာတွေကိုဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ရန်နှင့်ထိုင်းအလုပ်သမားများသာမကရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေး ပါတယ်။ ထိုင်းရေလုပ်သားနှင့် ရွှေ့ ပြောင်းရေလုပ်သားများလူ့ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ အသက်မပြည့်သေးသောကလေးများအားအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းများကိုကာကွယ်ပေးခြင်းများအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးပေးခြင်းများလုပ်သားများ၏ ပုံစံအစဉ်အတိုင်းလူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တားဆီးပေးခြင်း စသည်ဖြင့်ဒီလိုကိစ္စရပ်မျိုးတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါကရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ နှောင်လာသားသမီးများ အတွက်အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ် ။
ယခုလက်ရှိဖောင်ဒေးရှင်းဟာဆိုရင် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွား မှာဖြစ်ပြီးအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသော ပြည်သူများနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းခံရသော ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းလူကုန်ကူးမှုခံရတဲ့ထိုင်းရောရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများတွေကိုပါ အထိရောက်ဆုံးကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Anti Human Trafficking Network in Thailand (ATN)
ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ထိုင်းလူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး
Cambodia and Thailand Anti-Human Trafficking (CAHT)
ထိုင်းနှင့် ရွှေ့ ပြောင်းရေလုပ်သား သွေးစည်းရေးအဖွဲ့ 
Thai and Migrant Fishers Union Group (TMFG)
မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအားကူညီရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့ 
Solidarity Committee for the Protection Myanmar Migrant Workers (SCPM)
ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့ 
Samutsakhon ,ဘန်ကောက် ,ကန်ချနပူရီ ,ရတ်ချပူရီ,ရယောင်,တလာ
ဒေသခံလူ့ အခွင့်အရေးနှင့် လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တားဆီးရေး
အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း( LPN) ကိုဆက်သွယ်ရန်နေရာ
အမှတ် 25 / 17-18 မဟာချိုင်မိန်းထောင်ကျေးရွာ၊ ဆာဟာခွန်လမ်း၊ အန်ဖေမိန်း စမူဆာခွန်ခရိုင် 74000.
ဖုန်း034 434 726, 086 163 1390.
E- mail: somponglpn@gmail.com
TaggedfoundationlabourLabour rights promotion networkLPNMyanmarMyanmar live newsMyanmar news
Previous Article ကမ်းခြေနှင့်ထိစပ်သော 22 ခရိုင်မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်ငါးဖမ်းသင်္ဘော 70 အား စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးနောက် ငါးဖမ်းလုပ်သားများကိုတန်းတူညီမျှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးထပ်လောင်းပြောကြား
Next Article QR Code ဖြင့်ငွေပေးချေရန်နည်းလမ်းအသစ်